I-China WIK9070 Wheel Excavator Umkhiqizi kanye Nomthengisi | UWilk
WIK Iphuzu lokuthengisa ngomkhiqizo elingu-9070
Injini yomkhiqizo odumile yasekhaya inamandla aqinile futhi ihlangabezana nezidingo zokusebenza kahle.
Umklamo ofanelekile wokulawula nokonga okuthuthukile kwamandla kwenza ukusetshenziswa komshini kukaphethiloli kube kuncane.
· Ukusetshenziswa kwamafeni amasha okupholisa nezithulisi ezinkulu kwenza umsindo womshini ube phansi;
· Sebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-turbocharging ukuthuthukisa ukuguquguquka komshini ethafeni;
· Isembozo sefeni esimise okwefaneli sikhuphula kakhulu ukungena kwenjini kanye nekhono lohlelo lokuqeda ukushisa, ukuqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo nokusebenza kahle komshini.
Uhlelo oluthuthukisiwe lwe-hydraulic
Ukulungiswa kokuphela okuphezulu: Iphampu enkulu, i-valve enkulu, i-rotary motor, ukuhamba ngezimoto, isilinda, i-valve yokushayela nezinye izinto konke kungumkhiqizo owaziwa umhlaba wonke ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Hlanganisa imiphumela yocwaningo yakamuva, unciphise ukusetshenziswa kwamandla, uthuthukise ukwakhiwa, futhi uphendule ngokushesha.
· Ukulawula okunamandla nokunemba: Thuthukisa izici zokumunca isidlidlizi ukuqinisekisa ukuthi isenzo sokumisa ukuzungeza sinembe kakhudlwana futhi sizinzile; ngokwandisa indawo yokugcina i-torque, umshini unikeza amandla okujikeleza anamandla amakhulu;
· Isilinda esinomsebenzi we-buffer: i-boom cylinder ne-stick cylinder, isilinda sebhakede sakhiwe nge-buffer, enganciphisa ukudlidliza komshini nomthelela, kunciphise umsindo futhi kunwebe impilo yesilinda
· Ubuchwepheshe bempompo yokuhlangana kabili: khuphula izinga lokugeleza kwe-valve enkulu kusilinda ngasinye se-boom, induku nebhakede ukukhuphula isivinini sokusebenza.
Okumangelengele nokuhlala isikhathi eside ukuthembeka okuphezulu
I-chassis eqinisiwe, i-hydraulic power steering, i-axle ye-eksijini yokuqinisa, yenza ngcono ukuguquguquka nokuqina komshini.
Izingxenye ezibalulekile ezikhulunywa ngenduku zamukela ukwakheka, okunganciphisa ukucindezeleka futhi kuthuthukise ukuqina ngokushintsha ukwakheka nobukhulu bepuleti.
I-boom ifakwe ngokuhlanganisiwe futhi yakhiwa, futhi ekugcineni umshini oyisicefe uyisicefe, futhi i-oxane iyacutshungulwa, engaqinisa kahle ukuqina kwezingalo ezinkulu nezincane, yenze isikhathi sokusebenza kwephini nomkhono, ngaleyo ndlela igweme ukushisela ukwephuka lapho kufakwa khona insimbi, futhi ihlala isikhathi eside.
Amapuleti okusika amabhakede onke enziwe ngocwecwe lwensimbi olukhethekile olungagqokiwe, olulungele imisebenzi esindayo, futhi lufakwe amazinyo ebhakede angazweli ekugqokeni namazinyo asemaceleni ukwenza ngcono ukusebenza komshini.
Sebenzisa ipuleti lensimbi elijiyile nokungeza amapuleti ohlangothini wokuqinisa ukumelana nokugqoka;
· Kusetshenziswa ibhakede elengezeke phansi, indawo yokucheba ihle futhi iyisicaba lapho ilinganiswa.
· Nweba inkambu yombono kuzo zonke izinkomba, khulisa iwindi langaphambili, iwindi eliseceleni newindi elingemuva ukuqinisekisa inkambu ebanzi yombono, unciphise kakhulu izindawo ezingaboni, futhi usebenze ngokuphepha nangendlela efanelekile.
Khulisa ingilazi yesibhakabhaka ukuze uthuthukise ukubonakala phezulu futhi wandise umoya omncane. Ingilazi ethanjisiwe isetshenziselwa iminyango namawindi ukuvimbela ilanga eliqondile;
Zonke izilawuli zokusebenza zenzelwe futhi zahlelwa ngokuya nge-ergonomics theory.
· Isibambo sokusebenza kulula ukusilawula.
· I-Luxury pack egcwele ngaphakathi, iphaneli yokubonisa ye-LCD, izihlalo zikanokusho.
· Faka umoya opholisayo nomoya ofudumele ukuqinisekisa ukufudumeza nokupholisa okusendlini okusheshayo
Ukusebenza okuhlakaniphile nokubonisa
· I-Multi-function LCD qapha ngesikrini esikhulu, isibonisi sedijithali, ukuqapha okuphelele kwesimo sokusebenza kwenjini (isivinini sokujikeleza, ukushisa kwamanzi, ingcindezi kawoyela, njll.), Imininingwane ehlukahlukene yokusebenza komshini ingabuzwa nganoma yisiphi isikhathi.
Ukushintshwa komsebenzi kuhlelwe maphakathi kuphaneli yokulawula futhi kungakhethwa kalula ngezinkinobho zokuthinta.
· Ukusebenzisa uhlelo lokubeka i-GPS satellite, ukuxilongwa okukude, ukuxwayisa iphutha, ukugcinwa kanye nesikhumbuzi esizenzakalelayo.
Ukulungiswa okulula nokusheshayo ,,,,,,,,,,,,
Isihlungi sikawoyela, isihlungi samafutha somshayeli, isihlungi sikawoyela kaphethiloli, kanye nesihlukanisi samanzi kawoyela kufakwa ezindaweni ezingaxhunywa phansi ukuze kuhlolwe futhi kufakwe ezinye.
· Ithangi likaphethiloli elinomthamo omkhulu wokusebenza isikhathi eside.
· Amathuluzi amakhulu afaneleka kakhulu ekugcineni izinto ezisele.
· Umjikelezo wokulungisa nokugcina isikhathi eside: khetha izingxenye ezisezingeni eliphakeme kanye nezinto zokwengeza ukunweba impilo yesevisi nokunciphisa isikhathi sokugcinwa komshini.
WIK 9070 Faka amanani
Imodeli: WIK9070 Wheel Excavator
Scoop umthamo (m³): 0.21
Isivinini sokuguqula (RMP): 0-12
Umthambeka omkhulu wokukhuphuka (°): 25
Ubuningi bemba ibhakede (KN): 45
Amandla amakhulu okumba enduku (KN): 36
Uhlobo lwenjini: YC4DK85
Amandla / isivinini (KW / rmp): 62.5 / 2200
Uhlobo lweTire: 8.25-16
Ingcindezi yesistimu (MPa): 20
Ukuphakama kokumba okuphezulu (mm): 6245
Ukuphakama okukhulu kokulayishwa: 4630
Ukujula kokumba okuphezulu (mm): 3820
Ubukhulu bokujula okumba mpo (mm): 2700
Ububanzi bokumba (mm): 6360
Ubuncane bokujika ububanzi (mm): 2450
Ukususwa okuphezulu komhlaba kugandaganda:（mm）: 310
Ubuningi bokujula bokucwila kwebhodi lokugaya (mm): 130
Ubukhulu obukhulu sebubanzi * ububanzi * ukuphakama (mm): 6300 * 2205 * 2850
Ukuphakama kwekhabhu (mm): 2850
Isondo (mm): 2400
Isondo (ithrekhi) ibanga (mm): 1675
Ukususwa okuncane komhlaba (mm): 260
Ububanzi bomsila womsila (mm): 1940
Abavukuzi bamasondo kulula ukuwahambisa. Zisetshenziselwa ikakhulukazi amaphrojekthi amancane edolobheni futhi zisetshenziselwa ukuphathwa kukamasipala. Ungasebenzi ezindaweni ezithambile kakhulu. Uhlobo lwesondo ngokuvamile lusebenza emhlabathini wosimende nasotshani, futhi ngokuvamile alulimazi ubuso bomgwaqo. I-Track iyithuluzi lephrojekthi, elingacindezela umgwaqo. Inhloso enkulu yabavubukuli abanamasondo akuyona leyo yohlobo lokukhasa. Ukusetshenziswa kwezinto zokumba ezinamasondo kuyathinteka yimvelo futhi kunemikhawulo ethile. Kungenza umsebenzi omncane kuphela. Abavukuzi bokukhasa bangakwazi ukuzivumelanisa nanoma yimuphi umsebenzi noma imvelo.
I-Wheel excavator ingumshini wokumba onamasondo njengengxenye yokuhamba, ebizwa ngokuthi i-wheel excavator. Ukumba amasondo kunejubane lokuhamba ngokushesha, akulimazi indawo yomgwaqo, kungadlulisa kukodwa ebangeni elide, futhi kungashesha ukufaka amadivayisi ahlukahlukene wokusebenza. Ijubane lokuhamba eliphakeme labembiwa bamasondo angaphandle ikakhulu lingama-25-40km / h, kanti iningi lasekhaya liba ngu-20-35km / h. Yize ukusebenza kahle kokumba amasondo kungafani nokumba okukhasa ibanga, uma kuqhathaniswa nemali ebizayo yokudlulisa yokumba, ukumba amasondo kunezinzuzo ezithe xaxa zomnotho lapho kushintshwa amasayithi kaningi. Kungenxa yezici zayo ezehlukile zokuhamba, ukuguquguquka, nokusebenza kahle ukuthi ukumbiwa kwamasondo kusetshenziswe kabanzi ekwembeni nasekususeni izinto ezinjengamaphrojekthi wokulungisa omasipala, ukwakhiwa kokuthuthwa komgwaqo omkhulu kanye nokulungiswa okusheshayo.
Isakhiwo esiyinhloko se-hydraulic wheel excavator sakhiwe yidivayisi esebenzayo, ikhebula, indlela yokuthunga, idivayisi yamandla, indlela yokulawula ukudluliswa, i-chassis nemishini yokusiza. Phakathi kwazo, i-cab, iyunithi yamandla kagesi, kanye nemishini yokusiza konke kufakwe kupulatifomu ebopha ngokuphelele, evame ukubizwa ngokuthi i-turntable engenhla. I-chassis yamathayi yakhiwe ngohlaka, uxhaso, u-gearbox, i-hydraulic motor, ama-asi angaphambili nangasemuva, amathayi, njll., Futhi ihlanganiswe nomzimba ojikelezayo. Idivayisi esebenza ngokuyinhloko yakhiwe nge-boom, induku, ibhakede, induku yokuxhuma nezinye izingxenye. Ngokwendlela elisebenza ngayo, ibhakede linezindlela ezahlukahlukene ezifana nefosholo langaphambili, ibhande lasemuva, udonsa kanye nefosholo. I-boom ikakhulukazi ine-gooseneck uhlobo oluhlanganayo lokugoba kanye ne-hydraulic split multi-section boom. I-multi-section boom yebhakede le-backhoe lisetshenziswa kakhulu emikhiqizweni efanayo yangaphandle.
Langaphambilini WIK9085 Isondo Excavator
Olandelayo: WIK9088 Isondo Excavator